Kedu otu azụmahịa si enweta Pokémon Go | Martech Zone
Kedu otu azụmahịa si enweta Pokémon Go
Wenezde, August 10, 2016 Douglas Karr
Pokémon Go amaworị egwuregwu egwuregwu kachasị ewu ewu na akụkọ ntolite na ndị ọrụ kwa ụbọchị karịa Twitter na ọtụtụ ekwentị gam akporo karịa Tinder. Enweela ọtụtụ mkparịta ụka banyere Pokémon Go na azụmahịa ụwa na otu egwuregwu si bụrụ ihe dị ịrịba ama ọganihu n'ihi na ndị nwe ụlọ ọrụ. Otu ihe nke na-efu na mkparịta ụka ahụ bụ ihe ngosi nke ihe akaebe kedu ka ndị ọrụ Pokémon Go si emekọrịta azụmahịa mgbe ị na-egwu egwuregwu.
Nyocha gbasara Slant Marketing Pokémon Go ndị ọrụ wee chọta ụfọdụ data na-atọ ụtọ nke ukwuu na ha tụgharịrị ka ọ bụrụ ihe ngosi maka ndị ahịa azụmaahịa enwere ike ịhụ na ozi ha. Ihe Pokémon Go Pụtara Pụtara Maka Azụmaahịa Gị.
Nchọpụta na-akpali mmasị site na nyocha ahụ:
82% nke ndị egwuregwu # Pokémon Go gara na azụmahịa mgbe ha na-egwu egwuregwu, yana ndị egwuregwu ahụ kwenyere na ha bụ ndị isi rata ebe ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ka ha kwuru nọrọ na azụmahịa ihe karịrị 30 nkeji ma ọ bụ karịa.
51% nke ndị egwuregwu gara ahịa maka oge mbụ n'ihi Pokémon Go
71% nke ndị egwuregwu gara ahịa n'ihi na enwere PokeStops ma ọ bụ Gyms dị nso
56% nke ndị egwuregwu na-akọ na ha gara ileta azụmahịa dị na mpaghara mgbe ha na-egwu egwu na-agbanyeghị agbụ mba
Tags: pokemonPokémon na-aga
10 Ndị na - eme mkpọsa ọdịnaya agaghị enwe ike ịbanye ma leghara anya
3 Oge eji eme ihe nke ọdịnaya na-abawanye itinye aka